Jowhar.com : Somali Leader News - News: Maamulka degmada Qoryooley oo sheegay in Al-Shabaab ay go'doomisay degmada
April 23 2014 21:40:21
Maamulka degmada Qoryooley oo sheegay in Al-Shabaab ay go'doomisay degmada
Maamulka degmada Qoryooley ee Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in Al-Shabaab ay go'doomisay degmada, isla markaana ka jartay wixii gaadiid ee sahay u siday, iyadoo Maamulka uu ku hanjabay inuu qaadi dooo tallaabo.
Gudoomiyaha degmada Qoryooley Sayid Cali ayaa sheegay in cunaqabateyn dhinacyo kala duwan Al-Shabaab saartay degmada, gaar ahaan waxaa uu xusay in shacabkii ku dhaqnaa laga hor-istaagay gaadiidkii alaabaha ganacsi iyo sahay u siday.
"Degmada waxaa loo diiday inay soo galaan gaadiidkii ganacsiga iyo kuwii sahayda u waday, wadada dhanka Farxaano ayaga jooga, dhanka kale ee wadada dhanka koofureed, wixii gaadiid soo geli lahaa waxaa loo weeciyay dhinaca Buulo Mareer"ayuu yiri Gudoomiyaha degmada.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in aanay iska fadhin doonin, isagoo ku hanjabay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u furi doonaan jidadka ka xiran, isla markaana ay dhowaan ka dhaqaaqi doonaan degmada sida uu hadalka u dhigay.
Al-Shabaab oo laga qabsaday degmada Qoryooley 22-kii bishii hore ayaa deegaanada qaar ee si xeelad uga baxayay, iyagoo weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ku qaadayay, waxaan degmooyinkii lagala wareegay ay saareen cunaqabateyn.
master on April 02 2014
0 Comments · 2404 Reads
Jowhar.com735,577 unique visits